Vehivavy Nizeriana iray dia mamorona Wecyclers, orinasa fanodinana fako sy kitapom-bola - Afrikhepri Fondation
Nizeriana mpametaveta, mpanangom-bokatra sy orinasa mpanodina
Wecyclers dia manolotra serivisy fanodinana zava-baovao mifototra amin'ny bisikileta sy a rafitra informatika. Izy io dia mifanaraka amin'ny filan'ny mponina amin'ny toerana tsy ara-potoana. Mandray anjara amin'ny fitantanana tsara kokoa ny fako an-tanàn-dehibe any Lagos;
Voatendry ao amin'ny 2012, WECYCLERS dia orinasam-pandraharahana ara-sosialy natokana ho an'ny fanatsarana ny fitantanana ny fako any amin'ny tanàna tsy ara-dalàna ao Lagos, Nizeria. Ny famoriam-bola dia vita amin'ny alalan'ny scooters, antsoina hoe Wecycles, izay mivezivezy any amin'ireny faritra ireny ary mahasitrana ny fako amin'ireo mponina. Ny fako dia arotsaka sy zaraina amin'ny orinasa mpanodina any an-toerana. Ny WECYCLERS dia manome valisoa ho an'ny fianakaviana manana zavatra ao an-tokantrano mifototra amin'ny habetsahan'ny fako voaangona, ka hampiditra ny mponina amin'ny teknika fanodinana. Ny WECYCLERS dia misolo tena mihoatra noho ny trano fonenan'ny 3400, ny orinasa 50 nohariana, ary ny angady 525 dia nangonina.
“Ny fitantanana ny fako dia iray amin'ireo olan'ny olan'ny mahantra ao Nizeria. Tianay ny hamorona rafitra iray izay tsy mahatonga ny fako intsony ho olana, fa vahaolana ho an'ny rehetra. "- Bilikiss Adebiyi
Teraka sy lehibe tany Lagos niaraka tamin'ny iray tam-po aminy 4 i Kamariss Adebiyi nianatra sy niasa an-taonany maro tany Etazonia talohan'ny namolavolana ny tetikasa Wecyclers nandritra ny MBA tamina asa sosialy tao amin'ny MIT. Nitodika tany amin'ny sehatry ny fitantanana ny fako izy, resy lahatra amin'ny mety ho fisiany lehibe any Nizeria, eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fiatraikany amin'ny mponina. Niverina tany Lagos izy tamin'ny 2012 ary nanokana ny tenany manontolo ho an'ny Wecyclers.
Fa maninona no ilaina izany?
I Nizeria dia manana mponina mihoatra ny 170 tapitrisa, ao anatin'izany ny 21 tapitrisa ao an-tanànan'i Lagos fotsiny, renivohitra ara-toekarena ao amin'ny firenena. Io no firenena be olona indrindra eto Afrika Atsimon'i Sahara. Ny fitomboan'ny isam-ponina dia matanjaka (250 mponina fanampiny isan-taona) ary tombanana fa hahatratra 000 tapitrisa ny mponina amin'ny 35.
Fako maherin'ny 10 taonina no vokarina isan'andro ao an-tanànan'i Lagos, izay iharan'ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa hitantanana io fako io. Latsaky ny antsasaky ny fako (manodidina ny 000%) no angonin'ny governemanta monisipaly ary 40% amin'ireo akora azo averina ihany no azo.
Fanadihadiana momba ny Matrix & Impact
Ny SME tsirairay avy noho izany dia iharan'ny fanadihadiana lalina, ny tatitra any an-tampony. Miorina amin'ny fomba fiasa noforonin'ny ekipa tetikasa, ny fandinihana dia tanterahina miaraka amin'ny orinasa akaiky. Ny karazana fiatraikany samy hafa an'ny SME (toekarena, sosialy, tontolo iainana) ary koa ireo mpandray anjara voakasik'izany (mpanjifa, mpiasa, mpamatsy) dia dinihina sy adika amin'ny matrix de effets izay mandrafitra ny kofehy iraisana sy ny dinidinika. nandritra ny tatitra teo an-toerana.
Fiantraikany # 1: manatsara ny tontolo iainana
Tavoahangy plastika 289 taonina, kitapo plastika 195 taonina, kapoaka aluminium 43 taonina no voaangona ary namboarina tao anatin'ny roa taona. Ny fampiasana scooter ho an'ny fanangonana dia mamela ny fidirana amin'ireo distrika tsy dia misy olona tsara asa miaraka amin'ny fiatraikany ara-tontolo iainana voafetra.
VOKANY # 2: Mamadika ny fako ho fidiram-bola
Mpivarotra sy mpianatra tsy ara-dalàna indrindra ireo fianakaviana mpiara-miasa. Ny fianakaviana mpiara-miasa dia mahazo $ 10 isam-bolana eo ho eo avy amin'ny Wecyclers, izay afaka maneho hatramin'ny 20% amin'ny karaman'ny fianakaviana. Fianakaviana 3400 dia mpiara-miombon'antoka mavitrika ary ny ankamaroany dia ao amin'ny tanàna mahantra.
IMPACT # 3: mamorona asa
Famoronana asa 52, ao anatin'izany ny 37 full-time (mpitantana sy mpanangona). Manana fifanarahana ara-potoana ireo mpanodina fako 15. Ny vola miditra dia $ 125 isam-bolana, izay $ 8 ambonin'ny firenena ambany indrindra. Ny orinasam-pambolena manamboatra plastika dia mampiasa olona 10 ary miankina amin'ny 100% ny fako any Wecyclers.
VOKANY # 4: hampiroborobo ny toekarena eo an-toerana
Wecyclers mividy ny bisikiletany amin'ny mpamatsy eo an-toerana. Ny tsirairay dia mitentina 700 $, ary miaraka amin'ny andian-tsarety scooter 25, mihoatra ny $ 17 ny vidin'ny fividianana. Wecyclers dia mampiasa rindrambaiko novolavolain'ny orinasa Nizeriana hitantanana ny fikorianan'ny sms. Saika $ 000 no naloan'ny fanjakana Nizeriana tamin'ny haba sy haba tamin'ny taon-dasa.
IMPACT # 5: fanohanana mankany amin'ny toekarena ofisialy
Ny ankamaroan'ny mpiasa dia avy amin'ny tanàna mahantra ary io no asany voalohany voalohany. Wecyclers dia manampy ny fianakavian'olon-tsakaizany hanokatra kaonty ofisialy mba hahazoany ny isa wecyclers. Ity kaonty amin'ny banky ity dia azo ampiasaina handoavana hofan-trano, handray karama.
kitiho raha te hahalala bebe kokoa ...
sokajy TONTOLO IAINANA
Fanamarihana momba ny feon'ny fieritreretana - Documentary (2014)
Athena mainty: ny fototry ny sivilizasiona mahazatra (Kindle)
Andevo White Christian Silamo White - Documentary (2006)